भारतीय मिडिया यसरी बन्यो प्रचण्ड सरकारको मुखपत्र, झुठो समाचार छापेर एमालेको आलोचना !
ARCHIVE » भारतीय मिडिया यसरी बन्यो प्रचण्ड सरकारको मुखपत्र, झुठो समाचार छापेर एमालेको आलोचना !
पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बन्दा नेपालमा भन्दा खुसियाली भारतीय सञ्चार माध्ययममा देखिन्थ्यो । अहिले उनले राजीनामा दिँदा भारतीय सञ्चारमाध्यमले प्रचण्डको प्रसंशा गर्दै खुशी व्यक्त गरेका छन् ।
देउवा त्यस्ता व्यक्ति हुन्, विगतमा उनी प्रधानमन्त्री हुँदा प्रचण्डलाई जीवित वा मृत रुपमा बुझाउनेलाई पुरस्कृत गर्ने घोषणा गरेका थिए । अब भने देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि प्रदेश र केन्द्रीय तहको निर्वाचन उनैले गराउने छन् । स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन प्रचण्डले गराए र दोस्रो चरणको भने देउवाले गराउने छन् । नेपालमा स्थानीय तहको निर्वाचन दुई दशकको अन्तरालमा भएको थियो ।
हिन्दुस्तानको समाचारका लागि यहाँ क्लीक गर्नुहोस्